Saturday August 18, 2018 - 13:12:28 in Wararka by Super Admin
Waxaa cirka iskusii shareeraya khilaafka u dhaxeeya dowladda Mareykanka iyo xukuumadda dabadhilifka Turkiga kadib markii erayo kulul ay hawada isku mareen madaxda labadaasi dowladood.
Khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ayaa soo ifbaxay kadib markii Mareykanku uu isbuucii lasoo dhaafay Turkiga kusoo rogay cunaqabateynno iyo canshuuro dheeri ah oo lasaaray badeecadaha Turkigu u dhoofiyo gudaha mareykanka.
Farriimo dhowr ah oo Donald Trump uu qoray bartiisa Twitterka ayuu ugu hanjabay xukuumadda Anqara in cunaqabateymmo dheeri ah uu kusoo rogi doono haddii ay sida ugu dhaqsida badan usii dayn waayaan baadari Nasraani Mareykan ah oo muddo ku dhow 2 sanadood ku xiran gudaha Turkiga .
Trump oo hadlayay ayaa yiri "habdhaqanka anqara ee ku aaddan dhibaatada jirta waa mid axmaqnimo ah sii daaya Andrew Brunson haddii kale cunaqabateymo dheeri ah" , hoggaamiyaha dowladda Mareykanka ayaa carabaabay in aysan gacmaha ka laaban doonin daandaansi uu sheegay in uu uga imaanayo Turkiga.
Baadariga Mareykanka ee xabsi guriga ku ah gudaha Turkiga ayay xukuumadda Erdogaan ku eedaysay jaasuusnimo, maxkamad kutaal magaalada Izmiir ee Turkiga ayaa diiday in ay u hoggaansanto dalab ka yimid dhanka hoggaamiyaha Mareykanka ah ee ah inlasii daayo.
Labadan dowladood oo iskula jira isbaheysiga NATO ayuu ka dhaxeeyaa dagaal qaboow oo dhanka dhaqaalaha iyo awood raadsiga mandiqadda Bariga dhexe ah.
hoggaamiyaha dabadhilifka Turkiga ayaa isna soo saaraya hadallo uu ku doonayo in uu sare ugu qaado qiimaha lacagta maxalliga Liiraha oo bilihii hoos udhac ballaaran ku yimid kadib markii ay ku hor kuftay lacagta dollarka Mareykanka.
waxaa xusid mudan in ciidamo Mareykan ah ay ku suganyihiin saldhigga melleteriga Injarliik ee dalka Turkiga halkaas oo ay ka haadaan diyaaradaha mareykanka ee xasuuqa ka geysanaya mandiqadda shaam